Fahmidda Ujeedada UTM - Gofumed
Fahmidda qiyaasta UTM
Febraayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, Google Earth / Maps
Dad badan oo waqti kasta ayaa waydiinaya sida loo bedelo isku-duwidda juquraafi ilaa UTM. Waxaan dooneynaa in aan ka faa'iideysano kalsoonidii hudheelkan oo aan sharaxno waxa aan heysano sida ay UTM uga shaqeyneyso si ay u hesho shaki dhab ah.
Waxaan kugula talin lahaa haddii aad horey u soo martay mawduuca, ha iska tuurin daqiiqadahaaga caajiskaaga ... laakiin waxaad naga xariiri kartaa bartaada :). Ma aha ujeeddada boostadani in ay ka hadlaan saadaasha, sababtoo ah waxaa jira maqaalado badan oo kale, asal ahaan waxay tahay mid xiiso leh in la sharaxo xakamaynta iskudhafyada, waxaan u isticmaali doonaa Google Earth si ay u tusaan tusaalooyinka.
Isku-duwidda Juquraafi waxay ka timaadaa aduunka qaybaha qaybaha sida aan u noqon laheyn tufaax, jarjarada tooska ah ee loo yaqaan 'meridians' (oo loo yaqaano dhererka) iyo cidhifka xajmiga ee ay sameeyeen isbarbardhigyada (oo loo yaqaan latitudes).
Si loo tiriyo cirqiga waa qayb ka mid ah aaladaha, woqooyi ama koonfureed laga bilaabo eber illaa 90 heerkulubyada iyo labadan qaybood ayaa loo yaqaan 'hemispheres'.
In the case of dhererka, bilaabaan in la qoran ka suusho ee Greenwich eber suusho la yiraahdo bari, waxay ku qoran yihiin ilaa 180 darajo, halkaas oo suusho isla dalka (yeedhay antemeridiano) kala qaybinaya, qeybtii tani waxaa la yiraahdaa " this. " Markaas badhkii kale waxaa loo yaqaan West, guud ahaan wakiil W (galbeed), sida loolalka Greenwich bilow dhinaca ka soo horjeeda eber in 180 degrees.
Sidaa daraadeed isku-duwaha Spain wuxuu noqon karaa Latitude 39 N iyo dherer 3 W, iskudubar ee Peru wuxuu noqon lahaa Latitude 10 S iyo dherer 74 W.
Habkan loo go'aamiyo isku-duwayaasha aan u baahnayn in la sameeyo heer sare oo ka sarreeya heerka badda, maaddaama ay tahay fiilo ka bilaabma bartamaha dhulka dusha sare, tani waa saadaasha isticmaalka Google Earth, waana tan ee isku-duwayaasha isticmaala fiidiyo kml, marka lagu daro tixraaca looyaqaano tixraaca ah ayaa lagu darayaa taas oo ah habka lagu qiyaasayo dhulka dusha sare ee ujeedada cabiraadda. Google wuxuu u adeegsadaa WGS84 inuu yahay tixraac tixraac ah (inkastoo ay jirto qalabka kuu ogolaanaya inaad galaan UTM isku duwo Google Earth). Faa'iidada ugu weyn ee saadaashani waxa weeye in isku-duwiddu ay tahay mid gaar ah dhulka dushiisa, inkastoo xakamaynta hawlaha lagu xisaabinayo masaafooyinka ama tilmaamaha aysan ku habboonayn "kuwa aan juquraafiyiinta ahayn".
UTM ayaa isku duwaya
UTM ayaa isku duweysa bilawga fikradda ah in la tixgeliyo qariidad tixraac ah oo ku taala heerka badda oo ka soo baxaya qiyaasta cylindrical Raadiyaha Shirkadda. Dhulka waxaa had iyo jeer u qaybiya meridiyiin, qaybo ka mid ah lix digrii oo isku dhafan 60, kuwaa waxaa lagu magacaabaa aag. Tirinta goobahaasi waxay ka bilaabanayaan antemeridian, laga bilaabo eber ilaa 60 laga bilaabo galbeed ilaa bari.
Qaybaha in ay curiyaan isku midka ah laga bilaabo 84 S inay 80 N, oo waxay ku qoran yihiin warqadihii laga bilaabo C inay X ( "I" waa laga saaray iyo "O"), qeybta kasta oo uu leeyahay 8 degrees UNku X in laga reebo waxa uu leeyahay 12 degrees.
A, B, Y, Z waxaa loo isticmaalaa si gaar ah dabayaaqada; Google ma ku jiraan qeybtan sababtoo ah waxay u baahan tahay xisaabin aan xadidnayn oo ah dano gaar ah oo loogu talagalay oo keliya qoryaha dabaysha.
Wadarta guud ee 60 waa mid waliba 6, sidoo kale
Mexico waxay u dhaxeysaa 11 iyo 16
Honduras ee 16 iyo qayb ka mid ah 17
Peru u dhexeeya 17 iyo 19
Spain oo u dhaxaysa 29 iyo 31.
Qiyaasidda qiyaasta tiirarka ee heerka badda, waxay ka dhigeysaa xayndaabyada qaababkaasi inay leeyihiin cabbirro aad u la mid ah xaqiiqada cabbirka degaanka. Tani waxay ku saleysnayd nidaamkii hore ee loo yaqaan 'Latin America', oo ahaa NAD27, oo hadda NAD83 loo adeegsaday, oo loo yaqaan 'WGS84'. Haysashada tixraac kala duwan, qaababka labada isdhexgalka ayaa kala duwan.
Sidaas meel leeyahay x ah duwo, oo laga bilaabo in ay dhacdo Central America, soohdinta u dhaxaysa goobaha ay 15 16 oo uu leeyahay qiyaas ah duwo 178,000 oo gaadho oo dheeraad ah ama ka yar 820,000. Tani duwo kala duwan waa isku mid u ah zone kasta, at loolka la mid ah laakiin la caddeeyo, ma aha Roobka ah orthogonal laakiin ujeedooyin cabbirka maxaliga ah, waa wax la mid ah. xuduudaha u dhexeeya goobaha ku dhow, laakiin qayb ka dhan ah dhidibka dhexe, halkaas oo ay jiraan suusho si buuxda u taagan, kuwaas oo dhererkiisu waa 300,000 loo yaqaan "this been ah" ujeedooyin labada midig ee suusho iyo bidix waxaa jira unugyo no negative.
Xuddunta (Y coordinate) waxay ka bilaabantaa 0.00 oo ku taala qorraxda iyo dhererka woqooyiga oo leh iskudhacyo 9,300,000.
Khariidadaha aan ognahay ujeedooyinka cadawga, oo leh miisaan 1: 10,000 ama 1: 1,000 ka soo baxa qaybta ee aaggan, boostada soo socota waxaan kuu sharxi doonaa sida ay uga soo baxayso qaybtan.
wadataa Geographic, sida 16N 35W waa mid gaar ah, si kastaba ha ahaatee, UTM a duwo sida isagoo X = 664,235 Y = 1,234,432 u dhigmaa hal dhibic soo noqnoqda ee meelaha 60 loolka isla, labadaba Waqooyiga iyo Koonfurta; waxay u baahan tahay aag iyo jaanis dhexe si ay u qeexaan halka ay ka tirsan tahay.
Ka dibna labada isku-duwid ayaa lahaan doona tixraac tixraac ah. Xaaladda xiriirinta UTM, haddii ay ku jirto NAD27 uma ekaeyso WGS84 maaddaama mesheska qaabka koolladu uusan ahayn mid aan dhicin. Si loo bedelo Isku-duwaha UTM Isku-duwaha Juquraafiga ama waliba waxaa jira araajin u fududeeya, sida Naqshad jibbaaran.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in nidaamka CAD dhaqanka ma taageeri qiyaas ah, sida AutoCAD ama Microstation, AutoCAD kaliya sameeyey Map3D ama Microstation Geographics (From AutoCAD iyo Microstation 2009 8.9 XM samayn). By isticmaalaya AutoCAD map georeferenced la wadataa UTM, waxa aan leeyahay waa map a diyaarad Cartesian gudahood, laakiin waa in aan fahamsanahay in kuwa isku mid ah 60 ka jira meelaha kale ee loolka la mid ah labada Northern iyo barka Southern; Halkan ka noqdo shaqada adag ee UTM la beeraha kuwaas oo u dhexeeya laba aagagga.
Si ay ula falgalaan UTM, isku-duubnaanta Google Earth iyo Excel, xiriiriyeyaashu waxay noqon karaan kuwo waxtar leh:
UTM isuduwaha ee Google Earth
Isku-beddelidda juquraafi ahaan joomaafiran ilaa UTM iyo Excel
Transform UTM waxay isku duweysaa juquraafi ahaanshaha Excel
Post Previous«Previous Maareynta isbeddelada lagu sameeyay khariidada
Post Next Sida loo abuuro aflaxaada khariidadaha cadastaraalkaNext »
58 Jawaab in "Fahamka Ujeedada UTM"
Andrea isagu wuxuu leeyahay:
sababta x ay u leedahay xNUMX digrii
Waxay kuxirantahay waxa software ah ee lagaa rabo inaad aragto.
Iskuduwaankan aad u baahan tahay in lagu daro wuxuu ubaahan yahay aagga, maadaama uu ku celiyo mid kasta oo ka mid ah aagagga 60, labadaba waqooyiga iyo koonfurta.
iftiin isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan leeyahay iskudhafkan waxaanan u baahanahay inaan ogaado goobta, maxaan sameeyaa
N1300113 E 1040271. Waad ku mahadsan tahay
Ma arki karo sawirka waxa aad soo jeedinayso. Laakiin waa inaad fahanto in isku-duwayaasha utm aysan ahayn mid gaar ah, waxaa lagu celceliyaa aag walba isla latitude ahaan.
Sideen uga shaqeeyaa juqraafi ahaan? Aniga waxaan ku jiraa xuduudo u dhaxaysa 13 iyo 14,,,. feyl ka yimid magaalo ku taal aagga 13 iyo fayl kale oo ka socda magaalo ku taal aagga 14 oo waxaan ku dhejinayaa feyl hal ah si aan u arko sida ay u egtahay, su’aashaydu waa maxay sababta ay aad ugu kala fog yihiin markay isku dhowaayeen? Horaan u fiiriyay Google Earth wax walbana waa qumman yihiin, kaliya inay fog yihiin oo ay u muuqdaan inay yihiin kuwa ka sarreeya magaalada aagga 13 ee ka horreysa 14 marka xaqiiqda sidaas ma aha
Beatriz isagu wuxuu leeyahay:
haye way iga caawin karaan waxyaabaha soo socda: berrinka badiyaa waxaan dhibco ku qaadanayaa GPS, gudaha UTM ka dibna xog hoosta ka socota si aan uga shaqeeyo naqshadeynta AutoCAD, laakiin markii aad rabto inaad u dhoofiso khariiddada cadastral, hal dhibic oo keliya ayaa muuqda laakiin ma ahan sawir buuxa, Maxay tahay tan ... Ecuador
Xaqiijinta dulqaadka iyo deeqsiinta si aad ula wadaagto aqoontaada, Gofumed!
Buur Buuro isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan dhibcood aan ka helay ilo macdanta 2 siiyey in lacag dhimis macdanta ee Bolivia haddii anigoo warqadahayga waa in 56 psad iyo wadataa waa WGS 84 fadlan haddii aad iga caawin waayo, GPS telefoonka gacanta waan tegi desplasado dheer
Fernando Ojeda February, 2017 at
Waxaan doonayay in aan u beddelo UTM sida iskudhafyada Volcano Popocatepetl kuwaas oo ah:
Dhererka 98 ° 37¨40.00 "
Barnaamijka xisaabinta miisaankuna ma aqbalo dhererka 98 °.
Sidee ayaan u sii wadi karaa haddii ay iigu sheegto inaanan ka tegin 80 iyo 90, marka xogta ay tahay 9
Waa inaad isticmaashaa 8 ° 37'40.00 "oo aad tilmaantay qeeybta kale
Fernando Ojeda isagu wuxuu leeyahay:
Sideen u sii wadaa haddaad iiga sheegto inaanad ka tagin 80 iyo 90, marka xogtu tahay 98?
U dir dirista tifaftiraha (at) geofumadas.com
Qof ayaa iga caawimi kara mawqifka cabbirka dhulalka? Waxaan haystaa dhibcaha 4 ee dhibcaha iyo dhererka. Haddii qof la ii soo bandhigo waxaan soo diri doonaa xogta aan hayo waxaanan aad idiinka mahad celin doonaa. Waad ku mahadsan tahay
Anagu ma naqaan caddaynta aad adigu leedahay:
Malaha haddii aad faahfaahin dheeraad ah ka sii faahfaahiso xaaladda: Miyuu yahay labajibaarane waxaad samayn lahayd? Sawirku ma mid aan toos ahayn?
Miyaad kala qaybin doontaa khariidada?
BRUNO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan cusub in ay la tacaalaan GPS iyo maps ahay, i weydiiso, tusaale ahaan in ay qaataan qaar ka mid ah dhibcood ee x, y (4 dhibcood) oo shirqool ku lahaa kur, haddii goobta waa hektar 4 iyo waa in ay ahaataa dhufsanayaasha 100 kasta x, iyo Fadlan, jihada. Thanks (bruficarrasco123-4qoutlook.com)
Ma garanayo sida loo fahmo, waxayna kuxirantahay baddelaha aad isticmaaleyso. Xusuusnow haddii beddelaha uu leeyahay mid been abuur ah oo lagu soo daray, weligeed ma u ekaan doonto UTM-yada caadiga ah, oo ah waxa Google muujinaya.
Ivan Diez de Marina isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto, sababtoo ah waxaan isku dayay wax walba, mana shaqeynayo:
Waxaan isku dayayaa inaan isku rogo isku-duwidda juquraafi ah ee UTM, iyadoo la adeegsanayo dhowr ka mid ah kuwa wax bedelaya ee ku jira internetka. Marka hore waxaan u maleynayey inay khalad tahay, laakiin waan hubiyay oo dhanna waxaan isku mid ahay.
Waxaan raadsadaa isku-duwayaasha qaar ka mid ah Volcooyinka dabka ee Meksiko; Tan waxaan uga faa'ideystaa Google Earth waxayna i siisaa iskuduwe joqoraafi ahaan. Dhibaatadu waxay tahay markii loo beddelayo UTM, waxay iga gudbeysaa aagga 13 ilaa 14 tanina waxay u bedeshaa isku-duwayaasha gabi ahaanba, «x», illaa heerkaas oo baraf ah oo barafkii Colima (ugu dhow Badweynta Baasifiga) ay i tusayso isuduwe leh 600,000, halka Nevado de Toluca (oo ku taal bartamaha dalka) ay ii astaanayso qiimaha 400,000. Ma fahmin sababta.
Haddii aad si fiican u sharaxdo, waxaan isku dayi karnaa inaan ku caawino.
Waxaan ku siin doonaa tusaale aan tusaale kuu aheyn si aad wax u fahamto. Bal ka fikir spheroid ka gudbaya heerka badda, mid kale oo dhaafa mitirrada 200 ee xagga sare ka sarreeya, mid kale oo dhaafaya mitirrada 1000 ee ka sarreeya. Dhammaantood waa tixraac tixraac, isla markaana hal dhibic waa isku mid mid kastoo ka mid ah laakiin griigu ma ahan, marka dhibcaha UTM-ku waxay yeelan karaan iskuduwe ka duwan oo ku jira datum kala duwan
walwal isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ufiirinta u adeegsanaysaa qadar gaar ah
sida loo xisaabiyo masaafada km (miisaanka) ee ku-meel-gaadhka ah
U fiirso goob aad xiiseyneyso Dhulka Goolgle. Haddii ay tahay waqooyiga jihada isugeynta, waa aag 17 waqooyi. Haddii ay ka hooseyso, waa Soonka 17 koonfur.
Mahadsan, ma iga caawin kartaa su'aasha:
Download dem a waxa WGS84, waxaan u baahan tahay si ay u odoroso in UTM goobta waxbarasho waa koonfur galbeed Colombia (Nariño), su'aashu waxay tahay, taas oo meesha aan isticmaalo si ay u sameeyaan UTM, Zone 17s 17n safarkii.
Waad ku mahadsantihiin sharaxaadaada iyo cafis la'aantaada mawduuca.
Waa hagaag, anigu ma fahmin.
Naga soo dir koohka UTM si aad u aragto, maxaa yeelay dhibaatada si fiican uguma arki karo.
Halkan waa maqaal meesha aad ka soo degi karto shabakadda UTM ee qaabka muuqaalka
Markaan galo safka ugu horeeya, lat ayaa ku dhaca badda, Gacanka Meksiko. Adeegsiga WGS84
Kuwa soo socda, kuwaas oo ah UTM, waxay kuqoraanayaan qeexitaanka aaggooda.
Xaqiiqdii, haysashada saadaalin badan iyo isuduwidda nidaamyada aad u baahan tahay in lagu qeexo qofkii qaaday.
Francisco Escobar isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka mahadcelinayaa dhibta aad ka qaadato sharaxaaddan oo dhan, taas oo aan shakhsi ahaan u tixgelinayo mid aad u qiime badan oo qiimo leh, caddaynaya, laakiin waxaa jira qeexitaanno aad u isticmaasho in aanan fahmin sababtoo ah aan khibrad lahayn. Waxaan haystaa su'aal ku saabsan miiska soo socda oo qof i soo baray. Waxaad iigu sheegi kartaa oo keliya xogtan soo bandhigay ee hoosta ku yaalla, kuwaas oo nidaamka isku-duwidda ee ay ka tirsanyihiin iyo midkale (haddii ay leedahay). Waad mahadsantihiin, waan sugayaa.
Longitude Latitude East (X) Waqooyiga (Y)
enrique perezcastro isagu wuxuu leeyahay:
Halkee baan ka soo dejisan karaa qaabka leh shabakadda aagagga miyirka ah?
WHITE isagu wuxuu leeyahay:
Isticmaal gawaarida geo_utm0.4
Aan aragno, sharaxno dheeraad ah
Waa maxay bedelaadaha aad isticmaashay?
Ma waxaad ka dhigan tahay inaad sameysid isbedelka dib-u-celinta wuxuu ku siinayaa jawi kala duwan?
Fiiri, u adeegso utm xagga beddelaadyada digniinta iyo El Salvador xiriiriyayaashu waa 89 ° longitude iyo 13 ° latitude waxaan u isticmaalaa aagga 16 iyo waqooyiga hemisphere laakiin markaan beddelayo mitirka waxay i siineysaa 89 ° iyo 2 ° latitude ma noqon karto waxaan sameeyo.
Salaan, CONAGUA waxay i weydiisaa «Qorshee cabirka iyo xuduudaha hantida ee iskuduwaha UTM» qofna ma garanayaa yaa adeegan aniga ii sameyn kara?
Leaves isagu wuxuu leeyahay:
Aad u fiican, hadda waan fahamsanahay.
Jorantoni isagu wuxuu leeyahay:
Sare u fiican, sii wad habkan cusub ee barista kuwa doonaya inay wax bartaan ama xasuustaan ​​arimahan.
WAA IN AAD HESHIIS KU HESHIISTA 10 KU MEEL GAAR AH
Kaalmo wayn, mahadsanid!
Qaybaha UTM waa mitir.
Guillo isagu wuxuu leeyahay:
Qiimayaasha la keeno, waa maxay cutubyada? Waxaan u shaqeeyaa aljabra si aan u ogaado masaafada u dhaxaysa laba dhibcood iyo natiijooyinka waa mitir?
Waxaan u maleynayaa in si toos ah AutoCAD aadan awoodin. Waxaa laga yaabaa Civil3D inay wax leedahay, laakiin sida caadiga ah waa inaad iyaga beddeshaa.
iyo luiz da cruz pacheco isagu wuxuu leeyahay:
sidee baan u bedeli karaa isku-xirka jaalaha ah ilaa UTM isla goobta autocad Waxaan rajeynayaa in aad iga caawiso mahadsaniddan
Waa xog aad u wanaagsan
edy perez isagu wuxuu leeyahay:
aad u xiiso badan wax walboo horeyba iloobey wax walboo gabadhayda ah waxaan ahay beenin maskaxdayda mahadsanid.
Haa waa dhibaato aad u caadi ah iyo daciifnimada nidaamka UTM-ka. Waxaa jira xulashooyin, laakiin waxay kuxiran yihiin ujeedooyinka loo baahan yahay.
Ujeeddooyinka shaqada, bedelku waa in looga guuro bariga beenta ah, waxaa loola jeedaa, in meridian udub dhexaadka u ah deegaanka uu guuro Tan waxaa oggol barnaamijyada, ikhtiyaar u leh in wax laga beddelo nidaamka saadaalinta.
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad lashaqeyso jiqda iyo dhaadheer ee aaggan, ama shirqoollada saameeya geeska aagga. Markaa, ujeeddooyinka daabacaadda, ayay ku habboon tahay in macluumaadka loo bixiyo habkan si aan loo abuurin jahwareer.
Haddii aad leedahay meel lagu cabbiro oo tanina waxay ku taallaa laba goobo juqraafi ah, maadaama aan wakiil ka yahay iskudhafka, miyaanan tixgelin kaliya hal degaan ama labadaba?
ama si kale loo dhigo, sidee baan u matalaa meel lagu cabbiray wareegga wareegga?
Wanaagsan ma fahmi karo wax walba, laakiin waa inaad hubisaa aagga, sababtoo ah Zacatecas waxay ku taallaa 13 iyo 14.
Haddii aanad ku haboonayn meesha aad filayso, habka keliya ee lagu baaro waa cidda aad qaadatay xogta, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in si qalad ah loo fahmay in odayaasha dhexe ee x = 500,000 uu leeyahay barokac.
Alberto al isagu wuxuu leeyahay:
taas oo wanaagsan in ay jirto meelahan si ay u awoodaan in ay shaki ka galaan, waxaan ku qaatay darajooyinka leh isku-duwidda iskuduuban oo tani waa tusaale.
geliyaan isku-duwayaasha qorshaha shahaadada baalalka
iyada oo xogtan la socota
oo waxaan helayaa 24.01828298 -103.6614938
Sidaa daraadeed waxaan joognaa, su'aashu waxay tahay:
marka iskudhafadu yihiin x = 507258 y = 2658745
haddii aan joogno zacatecas iyo isuduwaha la sheegey waxay iigu dirayaan gobol kale, waana buur.
waxaa la aaminsan yahay in isku-duwayaasha la soo galey ay ka soo jeedaan suuqyada, waa dhibaatada aanan garaneynin nooca gps ama qaabka ay u qaataan, sidii aan u baari lahaa noocyada kala duwan ee sifooyinka iyo sifooyinka.
Waan idin jecel yahay Gabriela isagu wuxuu leeyahay:
Waan xiiseyn jiray sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa in aan ku arko iyada oo ku fiican Dunida.
katherine fernandes isagu wuxuu leeyahay:
I soo dir barnaamijkani waa mid aan dib u dhacin
wax xun, ma aqaano wax
Ismaaciil isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsan tahay galvarezhn, miyaad ku jirtaa inaad ogaato barnaamij kasta, habdhaqameedka ama wixii la mid ah oo aan samaynayo waxa aan tilmaamayo ee ku saabsan midowga laba aag? Waxaan u baahanahay arjiga autocad.
Si aad u sawiri isticmaalaya UTM isuduwaha gobollada in ay jirto meelaha xirmi waa lagama maarmaan in la beddelo this been ah oo ku taal bartamaha degaanka, sababtoo ah waa UTM habka dhidibada loo sameeyey, waayo, goobaha degaanka ... iyo in uu yahay tabar ah ugu yaraan xaaladahaas.
App this ma aha ee
Barnaamijkani waa mid wax ku ool ah in lagu sawiro autocad inta u dhaxaysa laba aag? maaddaama isku-duwiddu ay isku duweyso qiimaha celceliska in autocad aysan fahmin. Waxaan u maleynayaa in marka la soo galo isku-duwidda juquraafi iyo tilmaamidda aagga, barnaamijku wuxuu ka dhigayaa midda laba degaanka? ee isku duubnaanta koorsooyinka
Mariela isagu wuxuu leeyahay:
waa la fahmi karaa, sidaa darteed waxaan fahmi karnaa meesha laga bilaabo.
Nidaamyada tixraaca waa hal shay oo ah qaab kale oo lagu qiyaaso.
Qorshaha khariidadku waa inuu sheegaa labada marba.
Sorry Yorel, waa ay adag tahay si aad u hesho oo ay la socdaan qof kasta, laakiin haddii aynu sharax oo laba ayaa waxay damceen inay Doqon laga yaabaa inay tilmaamayso blogs kale oo sharxaya habka ugu yar doqon ah ... waxaa laga yaabaa in heerka of blog this ma aha adiga iyo waxaan u garan
... taas oo ka mid ah labada ... mid ka mida muraayada ama kan kale ...
oo ha ka welwelin, waxaan fahansanahay macnaha ereyga gaaban
yorel isagu wuxuu leeyahay:
maxaa nacas ah?
sameeyey isagu wuxuu leeyahay:
abel isagu wuxuu leeyahay:
isku dubaridadan ayaa iila muuqata mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waan ognahay meesha aan ku suganahay